अमेजन सेल्स सेन्टर कसरी काम गर्दछ?
अमेजनमा खुदरा उत्पादनको तयारी गर्ने अनलाइन व्यापारीहरूले अमेजन विक्रेता मध्य र अमेजन बिक्रेता मध्य बीच छनौट गर्न सक्छन्। यी केन्द्रहरू कसरी सेवा गर्छन् र कुन कारणहरूले तपाईंको छनौटलाई असर गर्न सक्छ? यी प्रश्नहरू म यस छोटो पोष्टमा जवाफ दिँदैछु। हामी विक्रेता केन्द्रीय र बिक्रेता मध्य बीचको अंतर लुकाउँछौं र दुवैको प्राथमिक फाइदाहरू छलफल गर्नेछौं। आशा छ, यो जानकारीले तपाईंलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्नेछ कि तपाईंको व्यवसायको लागि कुन विकल्पले राम्रो काम गर्दछ।
Amazon Sales Centre vs Amazon Amazon Central
Amazon Amazon Platform मा तपाईं कसरी बेचन गर्न सक्नुहुन्छ दुई विकल्पहरू छन् - विक्रेताको रूपमा पहिलो पार्टी विक्रेताको रूपमा) र खुदरा विक्रेता (तेस्रो पक्ष साझेदार) को रूपमा। अमेजनले तेस्रो-तेस्रो पक्षका विक्रेताहरूसँग फरक फरक काम गर्दछ। यी भिन्नता बुझ्नको लागि तपाईंले पहिला विक्रेटर र रिटेलरहरू बीच कसरी भेद गर्ने भनेर बुझ्नै पर्छ।
पहिलो-पक्ष विक्रेताको रूपमा, तपाईं विक्रेटर केन्द्रीयको रूपमा वितरक वा निर्माताको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। एक विक्रेताको रूपमा, तपाईं थोक मा अमेजन, र अमेजनमा आफ्नो उत्पादनहरु खुदरा खुदरा, यो सामान आफ्नो ब्रान्ड नाम भित्र ग्राहकहरु लाई रिसेट गर्दछ। यस अवस्थामा, अमेजन बिक्रीको प्रतिशत प्राप्त गर्दछ। तथापि, यस कार्यक्रमबाट, सबै ढुवानी र डिलिवरी घटनाहरू Amazon द्वारा ग्रहण गरिन्छ। विक्रेटर सेन्ट्रल पार्टनरहरू द्वारा प्रदान गरिएको वस्तुहरू लेबलद्वारा "डिपार्ट्स र बेइजिङ द्वारा बेइजिङ" मा भिन्न हुन सकिन्छ।
तेस्रो-पक्ष विक्रेताको रूपमा, तपाईंले अमेजन सेल्स सेन्टरको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसबाहेक, रिटेलरको रूपमा, तपाईं Amazon बिक्रेता फूर्ति (एफबीए) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो धेरै सजिलो छ किनकि यस कार्यक्रमको अनुसार, अमेज़नले तपाईका सम्पूर्ण आदेशहरू जहाजमा राख्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं आफैं सबै शिपिंग प्रक्रियाहरू संभाल गर्न सक्नुहुनेछ। Source - used vehicle appraisal sheet.
अमेजन सेल्स सेन्ट एन्ड वेंडर सेन्टर को प्रो र कन्स
अनलाइन व्यापारीहरु जसले अमेजन सेवाहरुमा न्यूनतम खर्च गर्न चाहन्छन् अमेजन विक्रेता सेन्टरसँग सन्तुष्ट हुनेछ। यो पनि तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु को लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण र आफ्नो आला भित्र प्रतिस्पर्धी रहन को अवसर प्रदान गर्नेछ। अर्को लाभ यो हो कि तपाई आफ्नो उत्पादनहरु को सान्दर्भिक केहि मूल्य निर्धारित गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अर्थ हो कि यदि तपाईं गुणस्तर को विचार को बढावा गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं सजिलै संग गर्न सक्नुहुन्छ।
अमेजनले दावी गर्दछ कि यसले कुनै पनि न्यूनतम विज्ञापित मूल्य अनुरोधहरू पुरस्कार दिनेछ। यद्यपि, विक्रेताहरूले केन्द्रीय प्रयोग गर्ने व्यापारीहरूले यो कथन बहस गर्न सक्छन् किनभने वास्तविकता अमेजनले पनि राम्रै काम गर्दछ।
अमेजन रैंकिंग प्रिन्सेल्स को अनुसार, कुनै अन्य विक्रेता को मूल्यहरु लाई मेल खाई जानी चाहिए। यसको मतलब यो हो कि चाँडै कसैले यस प्लेटफार्म बाहिर बाहिर एक विशेष उत्पादन मा कम मूल्य को बारे मा अमेजन को सूचित गर्छन, उत्पादन को लागत घट जाएगा। अमेजन प्राप्त गर्न म्यापमा फिर्ता ल्याउन यो जटिल छ।
यदि विक्रेता केन्द्रको तुलनामा, विक्रेता सेन्ट्रल पार्टनरहरूसँग मूल्य निर्धारणमा अधिक नियन्त्रण छ। तथापि, जो अमेजनका साथ राम्रो साझेदारीको खोजी गर्दै छन्, वेन्डर सेन्टरले थप अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
यदि हामी सूचीबद्ध अनुकूलन बारे कुरा गर्नुहुन्छ भने, अमेजन विक्रेता केन्द्रले उच्च लचीलापन प्रदान गर्दछ। तपाइँ सजिलै शीर्षकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, बुलेट अंकहरू र विवरणहरू सुधार गर्नका साथ साथै तपाइँका छविहरू अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्त्य गर्न, म भन्न चाहन्छु कि म अमेजन सेल्स सेन्टर प्रयोग गर्न चाहन्छु किनकि यसले अधिक लाभ र समर्थन प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, मसँग विक्रेता समर्थन सेवाको निरन्तर पहुँच छ।